Ahoana ny fampiasana drafitra amin'ny mailaka ho an'ny iOS | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iOS 6, iPad, Fampianarana sy torolàlana
Mail dia afaka manatsara be, fampiharana Cydia toa AnyAttach o Mail Enhancer Pro Manampy amin'ny fanaovana azy ho fampiharana feno kokoa izy ireo, saingy ny tena izy dia maro ny fiasa izay ananany amin'ny taniny, ary ny sasany amin'izy ireo dia tsy dia fantatra loatra. Ohatra iray ny fikirakirana ny drafitra. Ny fampiharana dia tsy mamonjy mailaka navelanao sasaky ny antsasaky ny farafarany, fa koa afaka miditra haingana amin'ireo drafitra ireo ianao hamita ny fahavitan'izy ireo amin'ny fandefasana azy ireo.
Rehefa mamela mailaka antsasaky ny mailaka ianao, na manapa-kevitra ny tsy handefa azy ary kitiho ny bokotra Delete, Manontany anao mivantana ny iOS raha te hamafa tanteraka ny mailaka ianao na raha tahirinao no tahirinao azy. Ilaina io safidy io raha te hamitana ny mailaka ianao aorian'izay ary mandefa azy. Fa ahoana no ahafahanao mamerina izany drafitra izany hamita azy io?
Tsotra be izany: mila fotsiny ianao tsindrio ary tazony ny bokotra hamoronana mailaka vaovao, Ilay eo amin'ny ankavanana ambony, ary ireo drafitra farany notehirizinao dia hiseho. Ny fisafidianana ilay tianao hofenoina dia hisokatra amin'ny fomba fanovana.
Ao amin'ny iPad News dia ho hitanao ny nanazava asa maro hafa tena mahaliana izay azonao atao mahazo bebe kokoa amin'ny mpanjifan'ny mailaka iOS anao, ho fanampin'ny fampiharana Cydia izay niresaka momba ny fiandohan'ny lahatsoratra. Andeha hojerentsika raha misy mpandrindra namorona rindranasa mailaka hafa ho an'ny iPhone ampirisihina hanao izay mifanaraka amin'ny iPad. Mandra-pahatongan'izany dia tsy maintsy mametra-pialana amin'ny fampiasana Mail isika.Mampiasa mpanjifa hafa amin'ny iPad-nao ve ianao? Izaho manokana, tsy nisy naharesy lahatra ahy, na dia Gmail, ny mpanjifa Google azonao amidy ao amin'ny App Store ary mifanaraka amin'ny iPhone sy iPad.
Fanazavana fanampiny - Mialà bebe kokoa amin'ny mailaka mailaka amin'ny iPad, AnyAttach dia nohavaozina mba hifanaraka amin'ny iOS 6 (Cydia), Mail Enhancer Pro dia afaka natomboka tao anatin'ny herinandro
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 6 » Ahoana ny fampiasana drafitra amin'ny mailaka ho an'ny iOS
iMotion HD, fampiharana hamoronana Time Lapses sy Stop Motions
Ambify, fampiharana iray mifehy ny jiro Philips Hue amin'ny gadona mozika